"Revival" - ebhange elikhulu futhi ikhanda ihhovisi layo elise eMoscow. Kuyinto phakathi izinkomba 50 ngobukhulu zezimali of credit izikhungo. IBhange inenethiwekhi sasivumela ebanzi amagatsha, etholakala ngokuyinhloko emaphakathi neRussia.
Yasungulwa yasebhange "Revival" ngo-1991 ngu-ekuguquleni omunye neminyango Agro-Industrial. Abasunguli we isikhungo esikweletu okwamanje ukugcina ukulawula shareholdings abalulekile, okuyinto ndawonye akhawunti cishe 60%.
Imvelo lesikhungo ezezimali - Universal. inombolo enkulu amabhizinisi ezinkulu kanye naphakathi likhona phakathi amakhasimende. Ngesikhathi esifanayo ngenkuthalo ukuthuthukisa okudayisa wemboni abolekise kanye imali.
Ukuze amakhasimende abafuna ukubeka imali sabo esikhululekile ukuze kuzuze ezihlinzekwa ibhange "Revival" iminikelo. Izinga lenzalo yemali mboleko ngeke ifane kuye uhlelo ezikhethiwe nokuphila eshalofini lemali ku-akhawunti. Kungaba kuze kufinyelele 11% ngonyaka.
"Revival" imali ebhange ngaphansi "okuzenzekelayo", ungavula ubusuku nemini, besebenzisa imishini self-service noma intanethi yebhange. Ekuqaleni, kubalulekile ukuba sigcine ubuncane ruble 3000, ikhasimende bangakhetha esilungele isikhathi: 1, 3 izinyanga noma izinyanga eziyisithupha.
Ekupheleni kwesikhathi ukubekwa, thintana legatsha yasebhange futhi kungadingeki. Yonke lemali izobe ngokuzenzakalelayo idluliselwe emuva ikhadi plastic, kuyokwehlela njengoba enqwabelene isithakazelo. Amanani ku ezifakwa Bank "Vozrozhdeniye" ngaphansi "okuzenzekelayo" linikeza kusuka 9.5 kuya 9.95% ngonyaka.
"Imali kusukela izinkokhelo zenyanga"
Vula iminikelo ebhange "Revival" ngokuya "Kuyazuzisa nge izinkokhelo zenyanga" kungaba lwemali Russian noma angaphandle. Ngesikhathi yesivumelwano ku-akhawunti yasebhange kufanele wenze ekhawunteni ruble okungenani 3,000, amadola 100 noma euro. Kunoma yikuphi, i-akhawunti Ungahlala agcwaliswa.
Bank "Revival" idiphozithi yanoma abantu zemvelo ngaphansi kwalolu hlelo ithatha inkathi 3, 6 izinyanga, 1, 1.5 noma iminyaka engu-2. Income inqwabelene ngesilinganiso 9,5-10,6% in ruble, 1,4-3% kumadola futhi 1.2-2.5% e-euro. Inzalo ikhokhwa nyanga zonke, futhi uma izifiso iklayenti kungenziwa lifakwa kwinani oyinhloko.
ezifakwa Okufanayo ohlelweni "Imali kusukela izinkokhelo zenyanga" idiphozithi yanoma ibhange "Revival" ngokuya "Online Kuyazuzisa" wavula kuphela yenkampani intanethi. I-Russian lwemali izinga ifinyelela 11%, futhi izimali zakwamanye amazwe - 3%. Isikhathi sokuba nokubekwa imali ku-akhawunti yasebhange oluthandwa wekhasimende kungase futhi kube kusuka 3 izinyanga 24. ukukhokhelwa imali kwenzeka ngenyanga ngayinye. I depositor ungacacisa yimuphi akhawunti yokudlulisa lenzalo noma ukhethe ofeleba zabo ukuze kwandiswe inzuzo.
"Umugqa Comfort" "Duduzani" futhi
izinhlelo ezimbili ezithi azifane, "Comfort" futhi "umugqa Nenduduzo 'ziyatholakala kulabo abadinga ukuhoxiswa esinqunyiwe. Lezi ezifakwa emabhange "Revival" ngendlela engafani wokuvula futhi lenzalo eliphezulu in ruble. "Ukhululekile" ikhishwa ehhovisi lesikhungo esikweletu kungaletha kuze kube 10.6% in ruble futhi 3.25% ngo-USD futhi 2.75% ngo-euro ukuba kubatshali bezimali abasha. "Umugqa Nenduduzo 'wavula nge-Internet Banking. On ke ungathola kufika ku-11% ngo-lwemali Russian futhi elifanayo e izimali zakwamanye amazwe. Investment eside uvunyelwe ongakhetha kuzo kukho okulandelayo: 6 izinyanga, 1, eminyakeni 1.5, 2 noma 3.
Amaklayenti ngubani besaba ukulahlekelwa ngenxa yezinguquko elibukhali exchange noma ufuna uthole imali eyengeziwe ngokushintsha ukubaluleka lwemali, zifakwe ebhange "Revival" ayatholakala kwi hlelo "Multi-lwemali". Ngesikhathi isiphelo sesimiso akhawunti inkontileka kuvuleka kumadola, euro futhi ruble. Phakathi kwabo kungaba yisiphi isibalo izikhathi ukuze uthumele izimali ngaphandle ukungasathandi komunye lwemali kwenye. imali eshalofini yokuphila kungaba izinyanga 6, 1 noma iminyaka 1.5. Izinga ruble kuyinto 8,1-8,4% ngonyaka, futhi dollar kanye euro - 0.5-1.2%.
Bank "Revival" iminikelo kwabahola impesheni linikeza izimo ezikhethekile, ukuhlinzeka isithakazelo owengeziwe. Ngokwesibonelo, ukuvula idiphozi "Kuyazuzisa nge izinkokhelo zenyanga" nekwetfula ekuphetheni inkontileka isitifiketi impesheni, ungathola kufika ku 10.9% ngonyaka in ruble.
abafumana ayatholakala kubahlanganyeli amaphrojekthi iholo futhi abasebenzi bezinhlangano yomphakathi. Kufanele kuqashelwe ukuthi ibhange "Revival" inikeza ukuze lelisu ukuthola amaholo nge amakhadi asebhange hhayi kuphela wonke ibhizinisi, kodwa futhi amakhasimende ngabanye.
Eminye imikhiqizo eyenzelwe amaklayenti ezizimele
Imvelo jikelele lebhizinisi kubangela inani elikhulu ezihlinzekwa udumo isikhungo abantu. Phakathi kwabo abekho ezifakwa kuphela kodwa futhi ukubolekisa, namasevisi akude, ephephile idiphozi amabhokisi, amakhadi asebhange kanye neminye imikhiqizo.
Eminye imikhiqizo ahlinzekwa yi ibhange "Revival", ube ambalwa analogue emakethe Russian, isibonelo, "iphrojekthi iholo ngamunye." Le sevisi ikuvumela ukuthola inkokhelo evela kumqashi ebhange "Revival". Kanye ukulawula elula imali yakho ikhasimende futhi uthola izinzuzo ezengeziwe:
amazinga encishisiwe ukubolekisa umthengi kanye isethi encishisiwe kwemibhalo.
izimo ezithuthukisiwe ekuklanyweni iningi imali. Amanani ku ezifakwa Bank "Vozrozhdeniye" ngaleyo ndlela zinikeza ephakeme.
yokuphathwa kwezimali Remote, kuhlanganise ukutholakala imali.
Cash afakwe ibhange "Revival" abantu insured ngokuhambisana nomthetho waseRussia.
Umlando omude, esikhulu, amafa kahle isabalalise kanye nezikweletu ziphakamisa "imvuselelo" lamabhange njengoba inhlangano yezimali okuthembekile. I lula inkonzo akude futhi geography ebanzi Amahhovisi ihlinzeka umsebenzi ukhululekile isikhungo obolekisayo. Ngakho-ke, ibhange "Revival" - a Ukukhetha kahle izikhungo yesimanje zezimali ngoba iningi amakhasimende.
Izimfihlo zendalo: namahloni futhi emnene ngayo. Ingabe kuhle noma kubi?
Kungenzeka yini ukushayela i-Miramistin emphunjini yengane?
Ukuya amatende: ukukhetha yetende